Banijya News | » हट्ला त कोटेश्वरको जाम ? यस्तो छ सरकारको तयारी हट्ला त कोटेश्वरको जाम ? यस्तो छ सरकारको तयारी – Banijya News
हट्ला त कोटेश्वरको जाम ? यस्तो छ सरकारको तयारी
कोटेश्वर–जडिबुटी सडक खण्डलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो सडक जाम भन्ने गरिन्छ । उत्त बाटो भएर हिडने दैनिक रुपमा लामै जाममा फस्ने गरेका छन् । जामबाट मुत्त गर्न सरकारले सडक विस्तार गर्ने भएको छ । उपत्यकाको बढ्दो ट्राफिक चाप कोटेश्वर क्षेत्रमा बढी रहेकाले सरकारले ट्राफिक चापलाई सहजीकरण गर्न दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना अगाडी सारेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै डेडिकेटेड सडक विस्तार गर्ने गरी काम सुरु गरेको गर्ने तयारी भएको छ ।
तत्कालका लागि सवारी साधनको जाम हटाउन जडिबुटी चोकमा दायाँ बायाँ दुवै भागमा सडक बिस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ । दीर्घकालीन रुपमा सुरुङ मार्ग, फ्लाई ओभर वा दुवै निर्माण गर्ने योजनामा सरकार लागेको छ ।
सडक बिस्तारका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सडक विभाग सहति सरोकारवाला निकाय सहमत भएका छन् । मन्त्रालयको सहमति पछि प्राविधिक सहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन अवलोकन, नापजाँच गरी सडक विस्तारको स्वीकृतका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।
सडक विभागका अनुसार उत्तरी भागमा साढे ३ मिटर फुटपाथ सहितको १ लेन सडक र दक्षिणमा २ लेन सहितको सडक विस्तार गर्ने योजनासहित काम अगाडि बढाएको हो । त्रिभुवन विमानस्थलको केही जग्गा प्रयोग गरी सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । यसका लागि उडान र सडक सुरक्षामा अवरोध नहुनेगरी निर्माण गर्न लागिएको छ । सडक विस्तारसँगै तीनकुनेबाट कोटेश्वर हुँदै पेप्सीकोला जाने र भक्तपुरबाट कोटेश्वर हुँदै सातदोबाटो जाने सवारीसाधनले जाममा बस्नु पर्देन ।